Dadka isticmaala qalabka macruufka in ay leeyihiin Lugood rakibay iyaga in marar badan cabasho ku saabsan ku kaaftoomi abuuray tirada weyn ee files unorganized kaydiyaa maktabadda Lugood ah. Marar badan ee tareenka audio ayaa -Qoral artist ama ay ula socdaan magacyadooda, seegay images dabool, files nuqul, iwm Abaabulka sida tiro badan ee files gacanta waa waqti lumis iyo daal. Si aad u soo kabtaan, waxaad kala soo bixi kartaa wixii Lugood dhinac saddexaad abaabulka software in aad badbaadin karaa hawsha culus ee maaraynta qalabka macruufka aad.
Miiska la isbarbar dhigo 5 ugu fiican qabanqaabiyayaasha Lugood.
Raaci My Music
http: //www.wondershare .com / tunesgo / https: //www.tuneupmedia .com / download / daaqadaha http: //www.mediamonkey .com download / / http: // musicorganizer code.com/rinsemusic http: //download.cnet. com / CopyTrans-Manager / 3000 -18546_4-10842241.html
5 stars 5 stars 4 xiddigood 4 xiddigood 4 xiddigood
Version Bilaashka ah ee madal Windows. macruufka version bixiyo: $39.95 Version maxkamad Bilaashka ah ee Windows. Version mushaarka: Times Annual: $ 31 Mid ka mid ah waqti-gadashada: $ 40 Maxkamad version Free heli karo. Lacag 'Gold' version: $ 24.95 Maxkamad version Free heli karo. Version mushaarka hal mar gadashada: $39.99 Freeware
Windows iyo macruufka Windows, Macintosh, Mac OS X Windows iyo macruufka Windows iyo macruufka Madal Windows oo kaliya
• Soo la interface nadiif ah oo abaabulan.
• awood maamul hufan ee qalabka macruufka badan.
• Streamlines hanaanka wareejinta xogta ka qalabka macruufka in computer iyo dib. • nadiifinta file hufan.
• Hordhac ah muujinta a smart 'Tuniverse.'
• DeDuper feature bixisaa saareen tus fudayd. • aqoonsiga Automatic ah tags ee files warbaahinta maqan.
• Si toos ah u tags saxar files warbaahinta gudahood ka dib markii madaxda macquul ah. badbaadiyay
• 'Customize' feature ka dhigaysa software dheeraad ah oo is-dhexgal iyo user-friendly. • Daahiriyo iyo abaabusha maktabadda Lugood si toos ah.
• Waxay beddeleysaa dabooli images by iyaga online raadinaya.
• Si toos ah u qabanqaabisaa kuwan raadkaygay audio ku salaysan ku sifayn. • 'Jiid iyo dhibic' feature gelineya inaad si deg deg ah files si sahlan wadaagaan.
• Waxaa la dhisay-in ciyaaryahanka music kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro files warbaahinta iyada oo codsiga.
• Waa freeware ah.
• Qaadashada waqti badan si ay u muujiyaan xog ka qalab macruufka ah shaashadda kombiyuutarka. • qaababka badan oo had iyo jeer keena isticmaalaya codsiga adag.
• Ka dib nadiifinta maktabadda mar, way adag tahay in la sababeeyo ay la isticmaalo maalin kasta. • Abaabulka cover album tahay waa hab adag.
• Badanaa shilalka, had iyo jeer kaliya ee furitaanka codsiga. • Qiimaha sare ee muuqaalada xadidan. • Uu leeyahay awoodda kaydinta lahayn.
• Waxay la shaqeyaan kaliya qalabka macruufka.
Wondershare TunesGo aad u saamaxaaya in ay maareeyaan warbaahinta kaydiyaa qalabka macruufka aad si hufan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay la wadaagaan files ka mid ah qalabka Apple aad oo aan haysan si ay u isticmaalaan Lugood. Faa'iidada ku daray isticmaalka software tani waa in ay kuu ogolaanaysaa inaad qabato hawlo aan kuwa kale ee suurto gal ah marka la isticmaalayo Lugood.
Wondershare Features TunesGo: • awood aad in uu abaabulo Lugood si hufan.
• Kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan videos, music, playlists, sawirada, iyo xiriirada ka macruufka qalabka si Lugood iyo dib u your computer.
• Maareynta dhan files warbaahinta kaydiyaa maktabadda Lugood aad .
• Kuu ogolaanayaa inaad badalo files music iyo video galay Apple taageeray qaabab.
• Wuxuu ka caawiyaa aad waafajinta qalab kasta Apple la your computer, oo aad u ogolaanaya in ay maareeyaan faylasha lagu kaydiyaa qalabka.
• aad u saamaxaaya in ay tirtirto files nuqul maktabadda Lugood iyo sidaas lacag la'aan ah ilaa meesha bannaan ee la rabin qabsadeen iyaga by.
• Ma qabanqaabiyaha wax ku ool ah music kugu caawiya inaad la abuuro playlists kartoo.
TuneUp Media waa fudud fur-in oo awood aad in uu abaabulo maktabadda Lugood aad si karti leh oo si sahlan loo hellayo maqan daboolida album, ay ka saareen files nuqul, iyo qamaar ah kuwan raadkaygay audio.
Features: '. magacyada iyo macluumaadka kale • The feature "nadiif" ah ee software-ka akhriya files warbaahinta oo dhan oo wuxuu diyaariyaa ee horyaal maqan, farshaxan
• Media TuneUp ee 'DeDuper' feature isticmaalaa technology faraha loomana baahno sare si aad u hesho boqolaal ama xataa kumanyaal iyo audio nuqul files kaydiyaa maktabadda.
• 'Tuniverse' waa feature oo dheeraad ah waa caqli ku filan oo ay ku siin ratings sare codsiga maadaama ay aad u digaa markii fanaaniinta aad jeceshahay u sameeyaan live ee magaalada. Habkaani wuxuu sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad ogaan music cusub oo ku salaysan danaha aad ku sifayn.
• TuneUp Media Support bixisaa forum taageero ah oo ay ku dhiirigelinayaan in uu. Forum waa in dadka isticmaala oo la kulmi karaan dhibaatooyin marka aad isticmaalayso codsiga.
MediaMonkey waa wax ku ool ah codsiga multi-featured in uu leeyahay ciyaaryahan audio file, qabanqaabiyaha music, iyo CD / DVD gubi dhafan ee barnaamijka hal. Software baa laga beddeli karaa sida aad ka jeelahay - feature ah ma bixiyaan codsiyada kale ee la mid ah.
Features: . • MediaMonkey maamuli kartaa kumanaan audio iyo video files kaydiyaa maktabadda Lugood aad si hufan oo deg deg ah
. • software wuxuu kuu ogol yahay inay muusikada, filimada, iyo podcasts
• Marka lagu rakibay, codsiga si toos ah ka heli maqan images cover album iyo metadata kale .
• Isticmaalka software-ka, waxaad ka ciyaari kartaa MP3 iyo Cajalado kale qaabab file kala duwan.
Raaci My Music waa software ah standalone in si adag isku la Lugood iyo aad u saamaxaaya in ay abaabulaan si nidaamsan iyo bu maktabadda Lugood aad.
Features: • raaci My Music si toos ah u badalay maqan images cover album by iyaga online raadinaya.
• Codsiga waxaa ka buuxa ee tags macluumaadka maqan oo ka mid ah kuwan raadkaygay audio si toos ah ula click hal.
• software ayaa aad u saamaxaaya in ay soo saarto faylasha nuqul maktabadda Lugood aad .
• software waxay abaabushaa ah kuwan raadkaygay audio siday u kala sifayn, Halkan ka suuragelinayo in aad sameysato playlists kartoo si fudud.
Iyadoo tababaraha CopyTrans aad la wadaagi karto files dhexeeya macruufka qalabka iyo PC adiga oo aan la isticmaalayo Lugood. Software ayaa sidoo kale awood u aad u saxaa, ku dar, ciyaar, iyo abaabulo hab aad files warbaahinta.
Features: • interface Simple iyo abaabulay bandhigaysaa qaababka hab fudud oo cad. Tani waxay aad u saamaxaaya in ay u aragto iyo maarayn oo dhan files warbaahinta si dhakhso ah oo fudud.
• Ciyaaryahanka warbaahinta dhisay-in kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro gabayadii iyo videos la click hal.
• The 'jiita iyo hoos' feature of software kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto files u dhexeeya macruufka qalabka iyo PC aad isu eego si degdeg ah.
• Barnaamijka waxaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan oo qorshee playlists kartoo kuu gaar ah.
> Resource > Lugood > Lugood Best Abaabulaha